Loom: ngwa eji ewu ka ịdekọ vidiyo na enyo | Nzukọ mkpanaka
Ignacio Sala | | Autlọ ọrụ akpaaka, Mmemme
N'ihi coronavirus, a manyere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ebe agụmakwụkwọ ịgbanwe ụzọ ha si arụ ọrụ, ọtụtụ n'ime ha na -eme mgbanwe maka ọmụmụ / ọrụ n'ebe dị anya. Agbanyeghị na mbido ọ na -ada ụda nke ukwuu, ọ bụrụ na ịnweghị akụrụngwa zuru oke, ụdị ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe n'ebe dị anya, ọ nwere ike ịbụ nrọ ọjọọ.
Ọ bụrụ na mkpa gị gafere dekọọ ihuenyo nke ngwaọrụ gị n'otu oge dị ka onyonyo gị, otu n'ime ngwa kachasị mma dị n'ahịa, n'ihi ịdị mfe ya bụ Loom, ọrụ na -arụ ọrụ site na ndọtị maka Google Chrome, yabụ na ịkwesighi ịwụnye ihe ọ bụla na kọmputa gị, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ime ya ma ọ bụrụ na ịnweghị Ọ dịghị amasị interface weebụ.
1 Kedu ihe bụ Loom
2 Kedu ihe anyị nwere ike ime na Loom
2.1 Ihuenyo + Igwefoto
2.2 Naanị ihuenyo
2.3 Cam naanị
3 Kedu ihe bụ Loom?
4 Kekọrịta vidiyo ndị emepụtara
5 Akụrụngwa kwekọrọ ekwekọ
6 Ego ole ka Loom na -eri
7 Ndị ọzọ na Loom ka ịdekọ vidiyo na enyo
7.1 OBS (Windows / macOS) - n'efu
7.2 Camtasia (Windows / macOS) - Akwụ ụgwọ
7.3 Onye na -egosi ọrụ (Windows) - n'efu
7.4 Lightstream (Windows / macOS) - n'efu
7.5 Shadowplay (Windows) - Ọ bụ n'efu
7.6 DemoCreator (Windows / macOS) - Akwụ ụgwọ
7.7 Ndekọ ihuenyo Movavi (Windows / macOS) - akwụ ụgwọ
7.8 Action (Windows) - Ọ bụ n'efu
7.9 Ihe ndekọ ihuenyo IceCream (Windows / macOS) - akwụ ụgwọ
Kedu ihe bụ Loom
Loom bụ ngwa dị egwu emere maka ebe agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ na -enye ohere mepụta ozi vidiyo ihuenyo n'ụzọ dị mfe / ngwa nke otu anyị ebe etinyere ma onyonyo anyị na olu anyị, yabụ na -ezere itinye vidiyo nke nkọwa ogologo banyere isi ihe ọ bụla a tụlere.
Vidio niile echekwara n'elu ikpo okwu, yabụ na ọ dịghị mkpa ịkekọrịta ha site na email ma ọ bụ bulite ya na nyiwe dị ka YouTube, Vimeo ma ọ bụ Facebook. Naanị anyị ga -ekekọrịta njikọ vidiyo anyị mepụtara ka onye ọ bụla, na -ejighị ikpo okwu, nweta ọdịnaya.
Ọ bụrụ na ọ bụ ọdịnaya nkeonwe, Loom na -enye anyị ohere tọọ okwuntughe nke na -egbochi ịnweta ya, dị ka ọtụtụ nyiwe ịkpọ oku vidiyo, nke na -edobe paswọọdụ na -enweghị nke ị nweghị ike ịnweta ya.
Kedu ihe anyị nwere ike ime na Loom
Ihe mbụ anyị ga -eme ozugbo anyị debanyere aha n'elu ikpo okwu, bụ ctụọ ma igwe okwu ma kamera weebụ nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ga -eji kọmpụta, ebe ọ bụ na smartphones enweghị nhọrọ karịa nke ngwaọrụ ahụ nyere.
N'ụzọ dị otu a, anyị ga -ahụ na anyị enweghị nsogbu ọrụ ọ bụla na mbụ anyị malitere iji ọrụ a. Site na nhọrọ nhazi, anyị nwere ike iji igwe okwu ma ọ bụ kamera ọ bụla ndị ọzọ karịa ndị otu ahụ na -enye anyị (ọ bụrụ na ọ na -enye ya).
N'oge ndekọ vidiyo, anyị nwere ike gbakwunye nkọwa ma mee ka akụkụ nke ọdịnaya pụta ìhè nke ka mkpa ka anyị lekwasị anya n'ihe kacha mkpa.
Loom na -enye anyị ohere dekọọ ihuenyo ma ọ bụ ngwa anyị na -arụ na kọmputa anyị, ezigbo ọrụ ịdekọ vidiyo nke nkọwa maka ebe agụmakwụkwọ, iji kọọ nsonaazụ akụ na ụba nke ụlọ ọrụ maka nkeji iri na ise gara aga, iji nye onye ahịa mmefu ego ... njedebe nke iji ngwa a bụ naanị na enwere ike. na anyị chọrọ inye ya.
Ngwa a na -enye anyị nhọrọ atọ:
Ihuenyo + Igwefoto
Site na ịhọrọ nhọrọ a, ngwa ọ ga -edekọ ma ihuenyo ahụ / ngwa anyị họrọ dị ka foto site na kamera weebụ nke onye ọrụ na -eme ihe ngosi.
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị kerịta ihuenyo / onyonyo ngwa gụnyere olu ebe egosiri nkọwa kwesịrị ekwesị, anyị ga -ahọrọ naanị ihuenyo. Nhọrọ a agaghị eji kamera weebụ nke ngwaọrụ n'oge ọ bụla. Enwere oge mgbe onyonyo nwere ike ịdọpụ uche kama inye aka.
N'ikpeazụ, anyị na -ahụ nhọrọ Cam naanị, nhọrọ nke na -enye anyị ohere ịdekọ naanị onyonyo anyị. Nhọrọ a dị mma maka izipu ozi vidiyo ebe anyị chọrọ ịnye ozi na -akwadoghị ya site na ọdịnaya agbakwunyere anyị nwere ike ịnwe na akwụkwọ.
Kedu ihe bụ Loom?
Ngwa a ejighi eji mgbasa ozi ndụ a video na ndị ọzọ dị ka ọ bụ nzukọ. Maka okwu ndị a, n'ahịa anyị nwere ihe ngwọta ndị ọzọ dị ka Skype, Ndị otu Microsoft, Nzukọ Google ma ọ bụ Zoom na -agaghị n'ihu. Naanị otu n'ime nhọrọ ndị a niile na -enweghị oke oge bụ Skype.
Ngwa ndị a niile na -enye anyị ohere ịkekọrịta ihuenyo ahụ, yabụ ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ inwe nzukọ gbasara akwụkwọ, atụmatụ, klaasị ... nhọrọ nke Loom na -enye anyị Ọ bụghị ihe anyị na -achọ.
Kekọrịta vidiyo ndị emepụtara
Ozugbo anyị mepụtara vidiyo (s) anyị chọrọ, ọ bụ oge ịkekọrịta ha. Dịka m kwuru n’elu, vidiyo niile na -akwado na ikpo okwu Loom, yabụ na ọ dịghị mkpa ka ị bulite ha na nyiwe ndị ọzọ iji nwee ike ịkekọrịta ha.
Emepụtara vidiyo ahụ, ga -ewepụta njikọ na -akpaghị aka na anyị nwere ike ịkekọrịta ya na onye ọ bụla ga -enweta vidiyo ahụ, vidiyo anyị nwere ike iji paswọọdụ chedo. Ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime ndị ebumnobi vidiyo a anọghị na kọntaktị anyị, anyị nwere ike tinye ha tupu ekerịta vidiyo ahụ.
Akụrụngwa kwekọrọ ekwekọ
Na mbido akụkọ a, ekwuru m na ọ dị naanị mkpa iji ndọtị Chrome dịnụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ihe nchọgharị dabere na Chromium (Chrome, Opera, Microsoft Edge ...) ịkwesighi ịmalite iji ya, ebe ọ bụ na Loom na-eme ka ọ dịrị anyị. Ngwa dị maka Windows na macOS.
Ma kwa, kwa na -enye anyị ụdị maka ngwaọrụ mkpanaka, ọrụ na -enye anyị ohere imepụta vidiyo anyị ebe ọ bụla anyị nọ, n'agbanyeghị ma anyị nwere kọmputa n'aka, n'agbanyeghị, n'ụzọ doro anya, ọ na -aka mma.
Ngwa niile Loom na -enye anyị dị maka gị budata n'efuHa agunyeghi mgbasa ozi, agbanyeghị na ọ dị mkpa ịmata njedebe nke ụdị atọ ọ na -enye anyị yana nke anyị kọwara n'okpuru.
Ego ole ka Loom na -eri
Loom dị n'ime ụdị ọnụahịa atọ:
Ụdị n'efu nke Loom na -enye anyị ohere mepụta vidiyo ruo nkeji ise. Ihe ruru mmadụ 50 na -emekọ ihe ọnụ nwere ike mepụta vidiyo nke ha nwere oke vidiyo 25 n'otu onye ọrụ.
Ụdị azụmahịa na -ewepụ njedebe vidiyo yana na mgbakwunye vidiyo ndị ọrụ nwere ike imepụta, yana otu oke nke ụdị ndị okike 50. Ọnụahịa ya bụ $ 8 kwa ọnwa maka onye okike yana ụgwọ kwa afọ.
Ụdị nke Enterprise bụ e mere maka nnukwu ụlọ ọrụ na -ewepụ njedebe niile nke ọnọdụ efu na azụmaahịa yana ịnye anyị ohere ịdekọ vidiyo na 4K, njikọta na Saleforce, Slack GitHub, Gmail, Dropbox ..., SSO, SCIM
Ndị ọzọ na Loom ka ịdekọ vidiyo na enyo
OBS (Windows / macOS) - n'efu
OBS bụ ikpo okwu ndị ọwa mmiri na -ejikarị eme ihe dekọọ egwuregwu / ihuenyo gị mgbe egosiri ihe onyonyo gị. Ngwa a na -echekwa faịlụ emepụtara na draịvụ ike, faịlụ nke anyị nwere ike bulite na YouTube, Facebook, kesaa site na email, bulite na ngalaba nchekwa igwe ojii ka anyị soro ndị ọzọ kerịta ...
Camtasia (Windows / macOS) - Akwụ ụgwọ
Nke a bụ ngwa ọzọ ama ama mgbe ọ bịara dekọọ ihuenyo akụrụngwa anyị yana onyonyo anyị. Dị ka OBS, a na -echekwa vidiyo ndị emepụtara na kọmpụta anyị, yabụ anyị ga -emecha bulite ya n'elu ikpo okwu nchekwa igwe ojii, YouTube ma ọ bụ Facebook iji kesaa ya na ndị ọzọ.
Onye na -egosi ọrụ (Windows) - n'efu
ActivePresenter bụ sọftụwia ọzọ efu na OBS maka ịdekọ ihuenyo ọ nwere ọtụtụ ndekọ bara uru yana ọrụ ndezi. Site na ya, ị nwere ike idekọ ihuenyo niile, mpaghara akọwapụtara, igwe okwu, ụda kọmpụta na kamera weebụ, wee bulite vidiyo ozugbo na YouTube na saịtị nkekọrịta vidiyo ndị ọzọ.
Lightstream (Windows / macOS) - n'efu
Lightstream bụ mmemme dabere na igwe ojii na-akwụghị ụgwọ nke ị nwere ike iji kama OBS. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru, gụnyere ijikọ ya na ngwaọrụ ndị ọzọ ama ama dịka Streamlabs. Ọzọkwa na -enye ohere iji ihe nkiri na ihe mkpuchi, yiri ihe ị ga -ahụ na OBS. Mana ọ dị nfe iji, yana interface onye ọrụ na -agagharị agagharị.
Shadowplay (Windows) - Ọ bụ n'efu
Shadowplay na -abịa Kaadị eserese nke Nvidia GeForce. Ebumnuche ya bụ maka ndị egwuregwu, na -eme ka ọ bụrụ sọftụwia kacha yie ihe nkiri OBS. Ebe ọ bụ na ọ bụ ngwakọta nke ngwaike na ngwanrọ, ọ bụ naanị nhọrọ ị ga -ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ngwọta nke na -emetụtaghị arụmọrụ egwuregwu.
DemoCreator (Windows / macOS) - Akwụ ụgwọ
Wondershare DemoCreator bụ ikekwe nhọrọ OBS kacha mma na ndepụta a. Ị nwere ike iji ya ọ bụghị naanị idekọ ihuenyo na ọdịyo (ma sistemụ ma igwe okwu), mana ọ na-abịa na onye nrụpụta wuru iji mee mgbanwe niile ịchọrọ na vidiyo ahụ. DemoCreator na -enye anyị ohere ịdekọ ihuenyo niile, akụkụ nke ihuenyo yana kamera weebụ.
Ndekọ ihuenyo Movavi (Windows / macOS) - akwụ ụgwọ
Ihe ndekọ ihuenyo Movavi bụ mmemme dị mfe iji rụọ ọrụ weghara ma onyonyo na vidiyo site na ihuenyo. Ị nwere ike iji ya weghara ihuenyo gị, ọdịyo na kamera weebụ n'otu oge, wee bulite vidiyo gị ozugbo na YouTube na saịtị ndị ọzọ.
Action (Windows) - Ọ bụ n'efu
Action bụ onye na -edekọ egwuregwu na na -arụ ọrụ na ụdị kaadị eserese ọ bụla, gụnyere Nvidia, DirectX, na OpenGL. Ngwanrọ a, dị ka OBS, nwekwara ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ ị nweghị ike ịhụ na OBS, dị ka ndekọ ngagharị nwayọ na nkwado mkpanaka. Ọ na -akwado ndekọ nke nseta ihuenyo.
Ihe ndekọ ihuenyo IceCream (Windows / macOS) - akwụ ụgwọ
Ọ bụ akụrụngwa bara ọgaranya nwere ike ejiri were weghara ma enyo na vidiyo. Ị nwere ike idekọ ihuenyo, kamera weebụ na ụda. Ihe osise ya na ihe nrụnye ya na -eme ka ọ bụrụ nnukwu ihe ngwọta mgbe ịchọrọ ịdekọ nkuzi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Autlọ ọrụ akpaaka » Loom: ngwa eji achọ mma ka ịdekọ vidiyo na enyo
Ndepụta ọrụ kacha mma WOW Classic